Izindlu zokudlela e-Sun City
I-Sun City inikeza izivakashi izinketho eziningi zokudlela, kusukela ekudleni okusemthethweni ezindaweni zokudlela ezihle kakhulu kuya kokudla okusheshayo okusheshayo. Izivakashi zingakhetha kusuka kuzitayela eziningi ezihlukahlukene ze-cuisine, futhi ziqinisekile ukuthola okuthile ukunambitheka kwazo.
Ngezo zonke izinto ezithakazelisayo ezinikezwa eSun City Resort, izivakashi zizofanele zisebenze isifiso sokudla, futhi kunezindawo zokudlela eziningi ezithokozisa izinto ezahlukene. Kukhona izindawo zokudlela ezinhle lapho ungakujabulela khona ukudlela okusemthethweni, noma izindawo eziningi zokudlela ezithengayo ezinikeza izitayela ezahlukene zokudla.
Izindawo zokudlela e-Palace of the Lost City
Okuhle kakhulu ebusuku ebusuku, imenyu e-Plume izobeka isimo sengqondo sobusuku obungenakulibaleka, obuseduze. I-cuisine ikhiphe ukupheka kwesiko saseFrance nge-flavour yase-Afrika - zonke izitsha ezivezwe kumamenyu zenziwe ngothando lomqondo. Le ndawo yokudlela yase-Sun City nayo igcwele i-Champagne Bar, lapho ezinye ze-champagne ezihle kakhulu zingavunyelwa khona.
I-Crystal Court ikhonza ukudla okumnandi emhlabeni wonke endaweni ehlelekile e-Palace of the Lost City. Isikhathi simi seCristall Court, njengoba imenyu yenzelwe ukudla kwakudla isikhathi eside kanye nemikhosi enhle. Isidlo sasekuseni esiningi sisetshenziswa kusukela ngo-06: 30 kuya ku-11h00, futhi izidlo zokugcoba umlomo zikhishwa kusukela ngo-18: 30 kuya ku-22h30. Izivakashi nazo zingajabulela intambama ephakeme kakhulu eThekwini phakathi kuka-15: 00 no-17h30 phakathi kokuzijabulisa nokuzilibazisa e-Sun City.
Izindlu zokudlela e-Cascades
Ebalahle kakhulu ebheka izingadi namanzi amanzi, iPeninsula e-The Cascades. Izivakashi zingahlala phansi ukunambitheka isitayela samazwe ngamazwe nge-buffet ebanzi. Le ndawo yokudlela yaseSun City inikeza nokudla kwe-la carte kuze kube ngu-180 diners. Ukudla kwasekuseni kukhishwa kusukela ngo-06: 30 kuya ku-11h00 nadla phakathi kuka-18: 30 no-22h30. Izivakashi zingayithokozisa umculo ophilayo kusukela ku-pianist ohlalayo ngenkathi bedla ngoLwesibili ngeSonto ebusuku phakathi kuka-19: 00 no-22h00.
Ukubhuka e-Bocado kubalulekile, njengoba lokhu kuyindawo yokudla yokudumile yezivakashi eSan City Resort. Ukuhlala ama-diner angu-250, i-Bocado e-Cascades Hotel igxila ekudleni komndeni futhi ihlinzeka ukudla okukhipha umlomo endaweni yaseMedithera. Noma yini evela ezidlweni ezinomsoco nama-al-fresco dinner angadliwa.
Le ndawo yokudlela yaseSun City Resort ivumela izivakashi ukuba zibe nesidlo esiseduze sekhaya lase-New York e-Palace yaseLost City. Vula kusukela ngo-12h00 kuya ku-1430 no-18h00 - 22h00, ukudla okukhipha amanzi kuhlinzekwa ngokubhuka kuphela. Uhlu lwewayini olunzulu olunamawayini angcono kakhulu eNingizimu Afrika, luqedela ukudla okuphakade.
I- Palace Gazebo
Igumbi leGazebo lisendaweni yase-Lost City e-Sun City Resort. Lapha, amahle aluhlaza kanye namazulu ase-Afrika avulekile abeka ithoni yokuthola okuhlangenwe nakho okuthandanayo, okuthandana nokuthandana kwamabili.
Izindawo zokudlela ehhotela ye-Soho Sun City
I-Raj e-Sun City Hotel iyindawo yokudlela yaseHalaal enikeza okuhlangenwe nakho kwawo wonke ama-flavour, izinongo nama-aromas ama-Indian Cuisine ajwayelekile kakhulu. I-Raj idlulisa izivakashi kwi-adventure yokudla okumnandi nsuku zonke kusukela ngo-11h00 kuya ku-15h00 nokudla kusukela ngo-18h00 kuya ku-22h00.
Ukubukwa okubukeka kahle kanye nokudla okumnandi kutholakala kwi-Sun Terrace. Indawo yangaphandle ibeka ithoni yokudla okuphakelayo. Inani elikhulu lezivakashi lingase lihlelwe ngesidlo sasekuseni se-continent, futhi nesidlo se-African style.
I-Legends yokudlela inikeza isipiliyoni esinombala obomvu kanye nokuhamba phansi kwenkumbulo njengoba kuhlonipha abantu abadumile abaye bavakashela iSun City kuyo yonke iminyaka. Imenyu yendawo yokudla ye-grill iyahambisana nokuhlukahluka kweziphuzo ezimnandi, ezingase zijabulele izingxoxo ezingapheli.
Izindawo zokudlela e-Cabanas
I- Palm Terrace
I-Palm Terrace iqinisekisa ukuthi zonke izihambeli zijabulela isipiliyoni sokudlela esingasoze sikhumbula. Ukuhlala izidlo ezingama-450, i-Palm Terrace ivulelwe isidlo sasekuseni se-buffet kusukela ngo-07h00 kuze ku-11h00 nango-12h00 ngezimpelasonto. Ukuze uthole isidlo se-buffet ngezingqikithi zamazwe ngamazwe, i-Palm Terrace ivuliwe kusukela ngo-18: 30 kuya ku-21h30. Le ndawo yokudlela ivaliwe phakathi nobusika, ngakho-ke thintana ne-concierge desk yakho ngaphambi kokwenza ukubhuka.
Indawo yokuvakashela yase -Sun City
yayiphefumulelwe i-vervet monkey, futhi i-aesthetics yayo ifana ne-rustic microbrewery. Okuhle kakhulu ekudleni kokuzikhandla kanye ne-craft beer, leli gastropub libheke echibini lomfula we-Valley of Waves. Ukudla okukhanyayo okuvela ngaphakathi kuvela kuma-pie okuzenzela, ama-slide amnandi, ama-salads ahlanzekile, ama-gourmet burgers, namabhasiksi okudla.
Ukudla okunomsoco nokunethezeka kukhonzwa phansi phansi kweSan City Resort, eduze neChibi le-Waves. Izivakashi zingakwazi ukungena kunoma yiziphi izithelo ze-salads eziphambili, ama-pie, ama-burgers namaFries amafrijini. Esikhathini Sokudla, okumele kube yi-try-try yizinhlanzi ezihlanziwe, i-veggie bunny chows nama-falafels.
Intambama enhle ingasetshenziswa ku-Crocodile Lounge. Indawo engasemaphethelweni e-Lost City Course, le ndawo yokudlela yase-Sun City ikulungele ukudla kwasekuseni okunethezekile nokuphumula.
Okufanele ukugcwalisa ngaphambi kokuphuma, i-Gary Player Country Club inikeza ukudla okukhanyayo futhi inikeza imibono emihle yegalofu.
Lezi zikhona eNkantolo Yokudla engxenyeni engenhla yeSikhungo Sezokuzijabulisa. Zihlanganisa: i-Mugg ne-Bean, i-Ocean Basket ne-Spur.
I-Harlequins Bar isenhliziyweni yeS Smoking Casino. Ibha ye-Cocktail iyathandwa iziphuzo zangaphambi kokudla, noma ukuzijabulisa ngaphambi kwezenzakalo eziyinhloko kusihlwa.
Esikhatsini seDaily Pool Pool, okuqabula ama-Cocktails ase-Afrika aphefumulelwe aqoshiwe ngenkathi ilanga. Izivakashi zingangena e-pizza ekhishwa ngamapulangwe njengoba zijabulela ntambama ephumule emgodini.
Kutholakala e-Waterworld eduze kwechibi, izivakashi zingathatha ukuluma okusheshayo ngaphambi kokumisa isikhathi somndeni wekhwalithi. Gwema ilanga emgodini bese ujabulela ukudla nokuphuza bese uthola ingxoxo.
Jabulela i-tapas ne-cocktails ku-Cherry Bar eyinkimbinkimbi, ngaphambi noma ngemva kokuhlola inhlanhla yakho emshinini we-slot. Le bar ibhekwe phansi kwekhasino ku-Sun City Hotel naseCasino, futhi izingoma ezijabulisayo zinikezwa yi-DJ ehlala.
Imoya engavamile futhi ekhululekile ibeka indawo ye-ntambama yangakabiphi ye-cocktail kanye nokudla okulula e-Cabanas Pool Bar.
I-Sun City Pool Bar
Ukudla okukhanyayo nokucwiliswa okumnandi kunikwa nsuku zonke esimweni esingavamile se-Sun City Hotel Bar Bar.
Izivakashi zingase zihlale phansi iziphuzo nokudla okukhanyayo i-Luma Bar ne Lounge, esiseduze nedamu ehhotela laseCascades. I-bar kanye ne-lounge nayo yindawo ekahle yezivakashi zokukhipha ikhofi yekhofi noma ingilazi ye-whisky.
I-Tusk Bar ne-Lounge inokuhlobisa okuhle kakhulu kwe-safari-themed. Okuhle kakhulu ngaphambi kokudla, ngemuva kokuphuza ukudla noma ukudla kwasemini, imenyu eyinkimbinkimbi ihamba ngeziphuzo ezihlukahlukene kanye ne-canapes enhle.
Ibha le-Maze linokukhethwa kokuhle, ubhiya bezindawo zobuciko kanye nemibono emihle ye-Sun City ingahle ijabule. I-bar ingabuye ibhaliswe ngemisebenzi yangasese nemikhosi.